DHAGEYSO:Jabhada ONLF oo dowlada Soomaaliya ku dhaliishay inaysan wax badan ka qaban dagaalada Kasocda deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO:Jabhada ONLF oo dowlada Soomaaliya ku dhaliishay inaysan wax badan ka qaban dagaalada Kasocda deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud.
Jabhada ONLF ayaa waxay dowlada dhexe ee Soomaaliya ku dhaliishay inaysa kala dhex galin maleeshiya beeleedka ku dagalamaya gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanka kaxandhaale ee dhaca xadka ay wadaagaan wadamada Soomaaliya iyo Ethopia.
Xoghayaha Jabhada ONLF C/raxmaan Maxamed Mursal oo warbaahinta la hadlay ayaa dowlada Soomaaliya,tan Etopia iyo maamulka Soomaalida ka dalbaday inay Talaabo qaadaan si loo kala dhexgalo maleeshiyaadka dagaalamaya loona mideeyo dadka walaalaha ah ee dhibaatadu ka dhex dhacday.
Dowlada Soomaaliya ayaa maalmo ka hor waxay xubno isugu jira wasiiro iyo xildhibano u dirtay deegaanka Kaxandhaale ee ay colaaduhu ka jiraan waxaana sidoo kale ay wali maleeshiyaad ku dagaalamayaan deegaano ku dhaw degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayadoo aan dhinacyadaas dhamaantood wali xal muuqda laga gaarin.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa laga soo doortay deegaanada Hoostaaga gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa shalay waxay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho waxayna ugu baaqeen dadka diriraya inay dagaalkaas joojiyaan.
Xildhibaanada ayaa sidoo Kale Tilmaamay inay kaalintooda ka qaadanayaan daminta colaadahaas sokeeye iyo isku soo dhawaynta dadka walaalala ah.
← Weerar mindi loo adeegsaday oo ka dhacay London
Cesc Fabregas oo todobaadkan dhameysiraya ku biirista kooxda mnoco. →